Boqor Salmaan Oo Xil Wasiir-nimo U Magacaabay Wiilkiisa. -
Boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan Bin C/Casiis ayaa mid kamid ah Wiilashiisa u magacaabay in uu noqdo Wasiirka cusub ee Wasaarada Tamarta Sacuudiga kadib xil ka qaadis lagu sameeyay Wasiirkii Wasaaradaasi.
Wareegto kasoo baxday Boqorka ayuu Wiilkiisa Amiir C/casiis Bin Salman ugu magacaabay Wasiirka Tamarta Sacuudiga, waxa uuna noqonaya qofkii ugu horeeyay oo reer Boqor ah oo Wasaaradan Wasiir ka noqda.
Wasiirka cusub ee Tamarta, Amiir C/Casiis oo takhasus u leh Hawlaha Tamarta waxa uu ka soo qalin jebiyey Jaamacadda Batroolka iyo Macdanta ee King Fahad University of Petroleum and Minerals.
Boqor Salman ayaa xilka ka qaaday Wasiirkii wasaarada Tamarta Sacuudiga Khaalid Al-Falix iyo Wasiir kuxigeenka wasaaradaasi, waxaana la sheegay ninka loo magacaabay Wasiirka in uu kamid yahay dadka ugu awooda badan dalkaasi.
Somaliland Oo Hayadaha Caalamiga ah ku Amartay Inay U Aqoonsadaan JSL.